Good Tips for Everything! | The World of Pinkgold
strike on February 23, 2009 at 12:28 pm said:
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) on February 23, 2009 at 7:43 pm said:
မနက်စားကို မီးပျက်တဲ့ အချိန်မှာ စားတယ်၊
နေ့လည်စားကို မီးမလာတဲ့ အချိန်မှာစားတယ်၊
ညစားကို မီးမှောင်တဲ့ အချိန်မှာ စားပါတယ် .. ခင်ဗျာ။
ကောင်းကင်ကို on February 24, 2009 at 10:17 am said:
Tips ကလေးတွေမှတ်သားသွားတယ် ညီမရေ။
mydiary on February 25, 2009 at 5:40 am said:
ခုမှရောက်ဖူးပေမယ့် မှတ်သားသင့်တဲ့ (40)ကို ဖက်သွားတယ်
လင်းအရုဏ် on February 25, 2009 at 6:45 am said:
မသက်ဇင် on February 28, 2009 at 1:51 am said:
ဗဟုသုတတွေ ဖြန့်ဝေပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်-
နေ့အိပ်မက် on February 28, 2009 at 11:07 am said:
မောတွားပြီ မှတ်သားစရာတွေဖတ်ပြီးတော့… 😛
နောက်တာပါ… တကယ်အသုံးဝင်တဲ့ အချက်လေးတွေချည်းပဲနော်.. မိုက်တယ်…. အချက်လေးဆယ်လုံးဖတ်သွားတယ်…. 🙂
နေ့အိပ်မက် on February 28, 2009 at 11:09 am said:
ဟူး.. မောသွားပြီ… မှတ်စရာတွေများလွန်းလို့….
နောက်တာပါ.. 😛 အချက်လေးဆယ်လုံးသေချာဖတ်သွားတယ်နော်
နေ့အိပ်မက် on February 28, 2009 at 11:13 am said:
အချက်လေးဆယ်လုံးသေချာမှတ်တွားပါတယ်ချင့်…. 🙂 တကယ်လိုက်နာသင့်တာလေးတွေပဲနော်….
ုkom on March 1, 2009 at 3:40 am said:
1 Mar 09, 11:25 AM
ုkom: ပြီစိတ်ကု ဖြေနေရတယ်။
ုkom: မလာတာ ကို ကြံဖန်တွေးပြီး ဖြေသိမ့်ထားရတာ။ သူငါ့ကို နစ်သက်ပါတယ်လေ. လိုင်းမကောင်းလို့ပါ ဆိုပြီ။ တွေြး့
1 Mar 09, 11:24 AM
ုkom: မြင်ရတာ ဝမ်းသာ။
ုkom: အာရာ ပင်ဂိုလေ။
အိမ် on March 2, 2009 at 12:34 pm said:
ထပ်ပြီး မှတ်သွားပြန်တယ်ဗျို့ တချို့တော့ လိုက်မလုပ်နိုင်တာတော့ သေချာတယ်ဗျာ ဟီး
MhawSayar on March 4, 2009 at 1:24 am said:
မှတ်သားသွားပါကြောင်းဗျာ. ။ ရှယ်ပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။ 🙂
Mg Ogga on March 4, 2009 at 9:11 am said:
လာလည်ပါတယ် မှတ်သားသွားပါမယ် သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း မျှဝေလိုက်မယ် ကျေးဇူး ကျနော်ဆီလာလည်တာကို လည်း ကျေးဇူး
ရွှေပြည်သူ on March 27, 2009 at 3:05 pm said:
ဒီစာလေးကို email ထဲက အကြိမ်ကြိမ်ရ ကတည်းက အရမ်းသဘောကျမိပြီး မူရင်းရေးသူကို ရှာနေတာ အခုမှ တွေ့ပါတော့တယ်။ တန်ဖိုးရှိတဲ့စာလေးအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ညီမလေး။ PinkgGold ကိုတော့ သိနေတာ ကြာပါပြီ။ လာလည်သွားတာကို တကယ် ၀မ်းသာပါတယ်။ ကျေးဇူးလည်း တင်ပါတယ်နော် :o)